In ka badan 100 dal ayaa taageeray hindisaha, laakiin Midowga Yurub wuu ka gaws-adaygay
Saturday October 23, 2021 - 08:18:37 in News by Xaaji Faysal
Ka dhaafitaanka hantida aqooneed, ummadaha horumaray waxay soo saari
Mareykanku wuxuu ka codsaday xubnaha Ururka Ganacsiga Adduunka (WTO) inay ka tanaasulaan xuquuqda hantida aqooneed ee tallaallada Covid si ay gacan uga geystaan ​​dagaalka ka dhanka ah masiibadan.
Ka dhaafitaanka hantida aqooneed, ummadaha horumaray waxay soo saari karaan qiyaasta joojin karta sinnaan la’aanta tallaalka adduunka.
"Waxaan u baahanahay in xubin kasta oo ka tirsan WTO ay sidoo kale kor u qaaddo oo ay taageerto dhaafitaanka hantida aqooneed, shirkad kastana waa inay u dhaqantaa si hami iyo deg-deg ah si loo ballaadhiyo wax-soo-saarka hadda,” ayay tiri afhayeenka Aqalka Cad Karine Jean-Pierre, sida laga soo xigtay Reuters.
In ka badan 100 waddan ayaa taageeray hindisaha, laakiin Midowga Yurub (EU) iyo dhowr waddan oo kale ma taageerin.
In kasta oo agaasimaha guud ee WTO Ngozi Okonjo-Iweala ay sheegtay in wadahadaladii rasmiga ahaa ee arrinta la joojiyay usbuucii hore, haddana waxay rumeysan tahay in dhinacyadu ay "heli karaan tanaasul dhab ah oo ku saabsan ka-dhaafitaanka IP-ga.”
Ururku wuxuu dejiyay taariikh bartilmaameed u ah heshiis mustaqbalka ah oo ku saabsan cudurada faafa ee adduunka oo dhan, wuxuuna rajaynayaa inuu heshiis ku gaadho shirkiisa Geneva ee la qaban doono 30ka Nofeembar ilaa 3da Diseembar sanadkan.
Sinnaan la’aanta tallaalka Covid ayaa weli ah arrin weyn oo ka jirta jawaab u helida masiibada adduunka.
Hindisaha adduunka oo dhan COVAX, oo ay wada hoggaaminayaan Ururka Caafimaadka Adduunka (WHO), ayaa looga golleeyahay in lagu yareeyo farqiga u dhexeeya tallaalka Covid adduunka oo dhan iyadoo la tallaalayo boqolkiiba 20 dadka ku nool waddamada soo koraya dhammaadka sanadkan.